Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa lagu wadaa in Magaalada Eldoret ee dalka Kenya uu kaga qaybgalo aas loo sameynaayo Askartii Kenya – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa lagu wadaa in Magaalada Eldoret ee dalka Kenya uu kaga qaybgalo aas loo sameynaayo Askartii Kenya
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa lagu wadaa in Magaalada Eldoret ee dalka Kenya uu kaga qaybgalo aas loo sameynaayo Askartii Kenya looga laayay weerarkii ka dhacay Degmada Ceelcadde ee Gobolka Gedo 15-kii Bishan.
Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa la filayaa inuu u duulo Magaalada Nairobi, kadibna Eldoret kaga sii gudbo si uu u tago halka aaska qaran loogu sameynaayo Askarta Kenyanka ah.
Waxaa sidoo kale aaskaasi ka qaybgalaya Madaxweynaha dalka Nigeria oo isagana lagu wado inuu tago Magaalada Nairobi.
Kenya ayaa ilaa hada aanan shaacin tirada askarta ah ee looga dilay weerarkii ka dhacay Degmada Ceelcadde ee Gobolka Gedo, inkastoo Shabaab ay sheegteen weerarkaasi inay ku dileen 100 Askari oo Kenyan ah.
Madaxweynaha dalka Kenya oo ka hadlay weerarka Ceelcadde ayaa ku eedeeyay beel ka mid ah Beelaha Dega Gobolka Gedo inay u fududeeyeen Shabaabka weerarkaasi.
Weerarka Ceelcadde Ciidanka Kenya loogu geystay waxa uu sababay ugu dambeyn in habeen hore saqdii Dhexe si rasmi ah Kenya ciidankeeda ay uga baxaan Degmada Ceelcadde.
Xukuumadda Kenya ayaa waalidiinta Askartooda weysan, waxa ay ugu yeertay inay tagaan Magaalada Eldoret si loo qaado Dhiiga DNA, kadibna loo aqoonsado meydadka Askarta la laayay, maadaama hada aanan la aqoonsan karin meydadkaasi.
Soomaaliya oo mar kale kaalinta hore ka gashay dalalka ugu musuq maasuqa badan Adduunka
Shirka Madashda wadatshiga qaran oo weli la isku afgaran la’yahay